I-radar yesiphepho: ukuthi iyini, iyini kanye nokubaluleka | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 03/01/2022 09:47 | Izimo zezulu
Namuhla, ngenxa yobuchwepheshe obuthuthukiswa nsuku zonke, umuntu uyakwazi ukubikezela isimo sezulu ngokunemba okukhulu nangokunemba okwengeziwe. Enye yezinto zobuchwepheshe ukufeza ukubikezela isimo sezulu yi i-radar yesiphepho. Njengoba igama layo liphakamisa, ingasisiza ukuthi sibikezele ukuguqubala nokungazinzi ngokwanele ukuze kubangele iziphepho.
Kulesi sihloko sizochaza konke okudingeka ukwazi mayelana ne-storm radar, yiziphi izici zayo kanye nokusebenziseka kwayo.
1 Yini i-storm radar
2 Indlela I-Storm Radar Esebenza Ngayo
3 Umlando kanye nokusetshenziswa kwesikhathi esedlule
4 Ukubaluleka ekuhleleni indiza
Yini i-storm radar
I-storm radar iyithuluzi elikhulu eliqukethe umbhoshongo ongamamitha angu-5 kuya kwangu-10 ukuphakama onedome eliyindilinga elimbozwe ngokumhlophe. Kunezingxenye ezimbalwa (izintingo, amaswishi, ama-transmitter, izamukeli ...) ezakha irada yale dome uqobo.
Amasekhethi okusebenza erada avumela ukulinganisa ukusatshalaliswa namandla emvula, kungaba ngesimo esiqinile (iqhwa noma isichotho) noma esiwuketshezi (imvula). Lokhu kubalulekile ekuqaphelweni nasekuqapheni isimo sezulu, ikakhulukazi ezimweni ezibucayi kakhulu, njengeziphepho ezinamandla kakhulu noma izimvula ezinamandla, lapho kunezingqimba zemvula ezinamandla kakhulu nezimile, okungukuthi, lapho imvula eningi inqwabelana endaweni eyodwa endaweni isikhathi esifushane.
Indlela I-Storm Radar Esebenza Ngayo
Umgomo wokusebenza we-storm radar usekelwe ekukhishweni kwemisebe yohlobo lwe-microwave. Le misebe noma ama-pulses emisebe ahamba emoyeni ngendlela yama-lobe amaningana. Lapho ukushaya kwenhliziyo kuhlangabezana nesithiyo, ingxenye yemisebe ekhishwayo ihlakazekile (ihlakazekile) kuzo zonke izinkomba futhi ingxenye ibonakala kuzo zonke izinkomba. Ingxenye yemisebe evezwayo futhi esakazwa iqonde ku-radar isignali yokugcina oyitholayo.
Le nqubo ihlanganisa ukwenza ama-pulses amaningi emisebe, okokuqala ngokubeka i-radar antenna endaweni ethile yokuphakama. Uma i-engeli yokuphakama yothi isethiwe, izoqala ukuphenduka. Lapho uthi luzizungeza lodwa, lukhipha imisebe yemisebe.
Ngemva kokuba uthingo luqedele uhambo lwayo, kwenziwa inqubo efanayo ukuze iphakamise i-engeli ethile, nokunye, ukuze kuzuzwe inani elithile lama-engeli okuphakama. Ngale ndlela uthola lokho okubizwa ngedatha ye-radar ye-polar - isethi yedatha ye-radar etholakala phansi futhi phezulu esibhakabhakeni.
Umphumela wayo yonke inqubo Kubizwa ngokuthi ukuskena kwendawo futhi kuthatha imizuzu eyi-10 ukuqeda. Isici se-pulses ye-radiation ekhishwayo ukuthi kufanele ibe namandla kakhulu, ngoba iningi lamandla akhishiwe lilahlekile futhi ingxenye encane kuphela yesignali yamukelwa.
Ukuskena kwesikhala ngakunye kukhiqiza isithombe, okumele sicutshungulwe ngaphambi kokuthi sisetshenziswe. Lokhu kucutshungulwa kwesithombe kufaka phakathi ukulungiswa okuhlukahlukene, okuhlanganisa nokususwa kwezimpawu ezingamanga ezikhiqizwe yizwe, okungukuthi, ukususwa kwezimpawu ezingamanga ezikhiqizwe yintaba. Kusuka kuyo yonke inqubo echazwe ngenhla, kukhiqizwa isithombe esibonisa inkambu ye-reflection ye-radar. I-reflectivity isilinganiso sobukhulu bomnikelo wamandla kazibuthe kagesi ku-radar ephuma ethonjeni ngalinye.
Umlando kanye nokusetshenziswa kwesikhathi esedlule
Ngaphambi kokusungulwa kwe-radar yemvula, izibikezelo zesimo sezulu zazibalwa kusetshenziswa izibalo zezibalo, futhi izazi zezulu zazikwazi ukusebenzisa izibalo zezibalo ukuze zibikezele isimo sezulu. Ngawo-1940, ama-radar ayesetshenziswa ukubuka izitha eMpini Yezwe II; lawa ma-radar ngokuvamile athola amasignali angaziwa, okuyilokho manje esikubiza ngokuthi i-Yufeng. Ngemva kwempi, ososayensi baba nekhono lomshini futhi bawuguqula waba yilokho esikwazi manje njengemvula kanye / noma i-radar yezulu.
I-Storm radar inguguquko ku-meteorology: pivumela izikhungo ezinkulu zezulu ukuthi zithole ulwazi lokubikezela, Futhi ungakwazi ukuqonda kusengaphambili amandla efu, kanye nendlela yalo nokuma kwayo. , Izinga kanye namathuba okubangela imvula.
Ukuchazwa kwesibikezelo esinikezwa i-radar yemvula kuyinkimbinkimbi, ngoba nakuba kuyintuthuko emphakathini wesimo sezulu, i-radar ayinikezi idatha ethile yebanga, futhi kunzima ukwazi indawo eqondile yethagethi yesimo sezulu. Lolu wulimi olukhulunywayo.
Ukuze benze izibikezelo ezinembe kakhulu, izazi zesimo sezulu zihlola ukunyakaza okuya phambili okungenzeka. Lapho ukukhanya kwelanga kushaya amafu, imvamisa yamaza kagesi kazibuthe aphumela kushintsho lwe-radar, okusivumela ukuba siqonde izici zemvula ezingaba khona.
Uma uguquko luhle, izindlela zangaphambili kanye namathuba emvula azokwanda; uma kungenjalo, uma uguquko lunegethivu, ingaphambili lizohlehla futhi amathuba okuna azokwehla. Lapho lonke ulwazi olusuka ku-radar ludluliselwa esithombeni sekhompuyutha, ingaphambili lezulu lizohlukaniswa ngokuvumelana nobukhulu bemvula, isichotho noma iqhwa ... Uchungechunge lwemibala lunikezwa kusukela kokubomvu kuya kokuluhlaza okwesibhakabhaka ngokuya ngobukhulu bemvula. .
Ukubaluleka ekuhleleni indiza
Into yokuqala ongayisho ukuthi i-radar yesimo sezulu iyithuluzi lokubuka, hhayi ithuluzi lokubikezela, ngakho-ke iyasikhombisa isimo semvula (shanela) lapho idatha iqoqwa.
Kodwa-ke, ngokubona ukuthi inani elikhulu lemvula lishintsha kanjani ngokuhamba kwesikhathi, "singabikezela" indlela elizoziphatha ngayo esikhathini esizayo: ingabe lizohlala endaweni? Ingabe izohamba ngendlela yethu? Okubaluleke nakakhulu, singazihlela yini izindiza ukuze sigweme izindawo ezineziphepho ezinamandla kanye nemvula?
Idatha eqoqwe yi-radar yethulwa ngamafomethi ahlukene wokubonisa. Okulandelayo, sizochaza izici ezimbili ezibaluleke kakhulu zokuhlela indiza futhi sibhekisele kokunye okuqukethwe lokho ziphinde zikhishwe ezilinganisweni ze-radar ye-Doppler.
Njengoba ubona, i-storm radar ilusizo kakhulu ekubikezelweni kwesimo sezulu futhi ingasisiza ngokuhlela indiza. Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-storm radar nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-radar yesiphepho